ALAKAMISY 31 MARTSA - ALAROBIA 6 AVRILY 2022
FIDINANA IFOTONY NATAON’NY FILOHA RAJOELINA : “Tsy maintsy arenina Andekaleka, fandoroana niniana natao no niteraka fahatapahan-jiro goavana”
Nidina ifotony, nijery ny fizotran’ny asa fanarenana an’ilay famatsiana herinaratra (centrale hydraulique) ao Andekaleka ny Filoham-pirenena tamin’ny alatsinainy lasa teo. 20 janvier 2022
Tanjona ny hamahana tanteraka ny olan’ny famatsiana jiro eto Madagasikara sy hisitrahan’ny Malagasy jiro mora, tsy tapatapaka ary mahavaly ny filan’ny vahoaka. Hita nandritra ny fidinana ifotony nataony fa nisy ninia nanapoaka ny fitaovana mpanova herinaratr. Efa mandeha ny fanadihadiana.
Raha tsiahivina fohy ny tantara, efa tamin’ny taona 1982 no notokanana ity fotodrafitrasa goavana ity ary ny Filoha teo aloha, ny Amiraly Didier Ratsiraka no tonga tany an-toerana nitokana an’izany. Taorian’io, tsy nisy Filoham-pirenena nahasahy nidina tany an-toerana intsony fa niasa jamba rafozana ny Jirama sy ny teknisianiny. 40 taona aty aoriana izany izay vao mba nisy indray Filoham-pirenena nanao fitsidihana an’ity « centrale hydraulique » izay andry iray lehibe iankinan’ny toekaren’ny firenena malagasy ity. Tafiditra indrindra ao anatin’ny fitadiavana vahaolana maharitra ny Filoha saingy Andekaleka tsy azo avela fotsiny ho simba satria mamaly ny filàna herinaratra maika ho an’ny besinimaro.
Ny ao Andekaleka no mamokatra ny ampahatelon’ny herinaratra mamatsy ny tambazotra iraisan’Antananarivo, izay mahatratra 90 MW. Noho ny fiovaovan’ny toetrandro sy ny fitomboan’ny filàna herinaratra anefa dia tsy maharaka intsony izany. Nanampy trotraka izay, nirehitra ny vata mpanova herinaratra iray mpamokatra 30 MVA tao Andekaleka ny 02 Janoary 2022 lasa teo. Vondrona mihary herinaratra na « Groupe” miisa roa izany sisa no miasa ao.
Tsy nanaiky ny Filoham-pirenena. Hita nandritra ny fanadihadiana sy fidinana ifotony natao mantsy fa niniana natao ny fandoroana ny milina tao Andekaleka. Noho izany hotolorana valisoa sy lelavola izay mahasahy mitoroka na manam-baovao mahakasika ireo mpanao ratsy. Nanterin’ny Filoha hatrany fa : “Tokony ho sarotiny amin’ny soa iombonana ny Malagasy tsirairay avy satria ny Jirama dia fananan’ny Malagasy ary iray amin’ireo orinasa malagasy hany sisa mihodina” “Ny nalehako aty dia hijery ifotony ny zava-nisy. Nanantitra ny Filoha fa na dia misy aza tsy fitoviana hevitra politika, tsy azo ekena ny famotehana fananam-bahoaka”. Raha ny nambaran’ny Filoha hatrany, tsy vao izao no nisy ny fikasana hanapoaka an’Andekaleka. Nijoro vavolombelona ny tenany fa tamin’ny taona 2018 nandritra ireny tolom-bahoaka niarahana tamin’ny Depiote 73, tetsy amin’ny kianja 13 mey ireny : nisy andian’olona niresaka taminy, nandresy lahatra sy nitaky homena vola hatrany amin’ny 40 tapitrisa ariary hanapoaka an’Andekaleka. « Nanatona ahy ireo olona ireo saingy tsy nety aho satria fananan’ny Malagasy ireo, ka sanatria ve tsy nekeko tamin’izany dia hisy hanao an’izany ankehitriny ? Tsy ekena izany ary tsy maintsy tadiavina ireo mpanao ratsy », hoy hatrany ny nambarany.
Anisan’ny fanamby lehibe miandry ny fitondrana ny famokarana herinaratra ampy ho an’ny vahoaka. Ankoatra an’Andekaleka, efa maro ny fotodrafitrasa natomboky ny Fitondram-panjakana mba hahafahana mamatsy herinaratra, toy ireo « centrales solaires » maro natomboka any amin’ireo renivohi-paritany toa an’i Fianarantsoa, Mahajanga, Toamasina, … Ny fananganana ny « centrale hydraulique » kosa mila 5 taona fara fahakeliny. Nandritra ity fidinana ifotony nataon’ny Filoha ity, nitafa fohy tamin’ny vahoaka niandry ny fandalovany teo amin’ny Kaominina Andekaleka ny Filoha, Andry Rajoelina raha andeha ho any Andekaleka. Isany nojereny manokana ny momba ny fitaterana an-dalamby hivezivezen’ny vahoaka, ny fitarainana amin’ny fandraisana ho mpiasam-panjakana ireo mpampianatra FRAM noraisiny ny taratasin’ireo mpampianatra rehetra tsy mbola mpiasam-panjakana, novahany ny olan’ny jiro eo amin’ny kaominina ( éclairage public) ary nambarany fa hisitraka ny vary mora ny vahoaka ao an-toerana manoloana ny fitarainan’ny vahoaka amin’ny halafon’ny vidim-bary hatrany amin’ny 2800ariary ny iray kilao. Nampandraiketiny ny Ben’ny tanàna ny fitsinjarana ny vary eo anivon’ny kaominina mba hisitrahan’ny tokantrano rehetra izany.
Tsiahivina hatrany fa ny famokarana herinaratra any amin’ity toerana voalaza eto ity no mora indrindra eto Madagasikara satria manodidina ny 5 ariary ny kwh. Avo zato heny amin’izany ny an’ireo orinasa hafa izay miara-miasa amin’ny Jirama ary anofantsika milina mpamokatra herinaratra. “Tsy maintsy miasa andro aman’alina isika ary tsy maintsy lazaina ny vahoaka ny zava-misy marina, fa tsy hoe tapaka ny jiro dia hihainohaino fotsiny” hoy hatrany ny fanambaran’ny Filoha. Nambarany koa fa mety mbola ho afaka iray volana vao ho vita tanteraka ny milina voalohany, afaka iray volana sy tapany ny faharoa ary afaka enina volana any ho any mihitsy vao ho vita izy rehetra. Rehefa vita tanteraka ireo vao hivaha ny famantsian-jiro ho an’Antananarivo sy Antsirabe.
Mahakasika ny milina mpanova herinaratra (transformateur) izay may kosa indray, nilaza sy nantitrantitra ny teknisianina avy amin’ny orinasa Jirama fa nipoaka ilay « transformateur » vao nirehitra. Fa tsy hoe nirehitra vao nipoaka. Satria raha izay no nitranga dia naratra na mety nisy maty ireo mpiasa niezaka namono ny afo. Ireo antony ireo no nahatonga ireo nidina tany an-toerana nirona any fiheverana ho fandoroana niniana natao izany ny raharaha, fa ny fanadihadiana nefa dia tsy maintsy atao.
"Izaho dia vonona na hamoizana aina aza ny fanavotana ny Firenena”, hoy Rajoelina FANAMARIHANA NY 29 MARSA 2022 (0) 8 avril 2022 « Efa mitady ny vahaolana tena mahomby ny Fanjakana » FIDANGAN’NY VIDIM-PIAINANA (0) 8 avril 2022 Hoditr’akondro voavoatra toa lavanila 53 kg sarona namitahan’olona HOSOKA TAO SAMBAVA (0) 8 avril 2022 “Tsy ekena intsony ny fitrandrahana an-tsokosoko” HALATRA SOKATRA 76 ISA TAO BEHELOKE (0) 8 avril 2022